Snn Nepal त्रिभुवन विमानस्थलमा नेपाल छाड्नेहरुको भीड – Snn Nepal
त्रिभुवन विमानस्थलमा नेपाल छाड्नेहरुको भीड
काठमाडौ‌ । सरकारले निषेधाज्ञालाई कडा बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल छाड्नेहरुको भीड बढेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार बसेको बैठकले २२ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने भएको छ ।
निषेधाज्ञा जारी हुनुपूर्व दैनिक १० देखि १५ वटा अन्तराष्ट्रिय उडान भएकोमा अहिले निषेधाज्ञापछि दैनिक १८ देखि २० वटा उडान भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवत्ता राजकुमार क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार अहिले २६ सयदेखि ३ हजारसम्म यात्रुले हवाई यात्रा गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
यो भन्दा अघि भारतबाट ट्रान्जिटका लागि यात्रुका कारण दैनिक बढीमा २४ सयसम्म यात्रुले हवाई यात्रा गरेका उनले बताए । तर, ट्रान्जिटका लागि आउने भारतीय नागरिकलाई सरकारले बन्द गरेसँगै हवाई यात्रु घटेका थिए । तर, अहिले वैदेशिक रोजगारका लागि जाने नेपाली कामदार, कूटनीति क्षेत्रका व्याक्ति, र संस्थागत रुपमा जाने यात्रुका कारण अन्तराष्ट्रिय उडानमा यात्रु बढेको क्षेत्री बताउँछन् ।
२१ बैशाख २०७८, मंगलवार प्रकाशित
नेपालको आग्रहमा भारतले खोल्यो लिक्विड अक्सिजनको आपूर्ति, अक्सिजन प्लान्टमा चौबिसै घण्टा बिजुली
अक्सिजन र स्वास्थ्य सामग्री अभाव हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता
रेम्डिसिभिर कालोबजारी गरेको अभियोगमा मिया पक्राउ
अक्सिजनका खाली सिलिण्डर अस्पताललाई उपलब्ध गराउ अनुरोध
कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश सरकारबाट चार करोड निकासा
१.	झाक्रीको टिप्पणीमा खगेन्द्र श्रेष्ठ (टाइगर) ले दिए गतिलो जबाफ
२.	भुगोलबाट माओवादी लाई हटाएर गुगोलमा सिमित गर्ने ओलिको सपना पूरा हुदै, जसपाले दियो साथ
३.	लघुबित्तकर्मी र कोरोना
४.	मै पाल्या कुत्ता मै देखि भुक्ता : एमाले नेता पान्डे
५.	एमसीसी प्रकरणमा नांगिए प्रचण्ड, यसरी खुल्यो पोल
६.	एमाले नेतृ शान्ता चौधरिको भावुक बनाउने ती शब्द
७.	प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका एमालेका सांसद पाण्डे कांग्रेसमा प्रवेश
८.	माओवादीको नाडी छाम्दै राजनेता केपी शर्मा ओली
९.	बिमला वलिको पार्टी परिवर्तनले शंकर पोख्रेललाई गरेन केही असर : पोख्रेल पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
१०.	निर्धन उत्थान लघुबित्तद्वारा कोरोना सङ्क्रमण रोकथामको लागि २ करोड १६ लाख बराबर आर्थिक अनुदान सहयोग प्रदान